I-Sikh Way of Life kunye ne-Guru's Teachings
Imigaqo yeGurmat Isikhokelo seSikh Living
Ubomi bemiSikh bobabili bobuqu kunye nobunqamle , okanye izalathisi. Kuba uSikh ozinikeleyo, ubomi bemihlaba ( uMiri ) buquka imilinganiselo yokuphila ngokomoya ( iPiri ). Indlela ye-Sikh yobomi ilandela i- gurmat , imigaqo efundiswa yi- ten gurus kwixesha leminyaka emithathu. Kungakhathaliseki ukuba isimo sokuqala, iSikh kufuneka ihambelane neendibano ze- Sikh zokuziphatha ukusuka ngexesha lokuzalwa kunye nobomi bonke kude kube sekufeni.
AmaKikhs aya kubuthana kunye nenkampani efana neyofana kwaye xa nibonisana, nibingelelana nithi, " Waheguru ji ka Khalsa - Waheguru ji ki Fateh ," okanye "iKhalsa ingabakaThixo-Ukunqoba kukukaThixo".
IiNkalo zoLuntu zeSiK Life
Ubomi bukaRhulumente buka-Sikh kunye noxanduva lwakhe luquka:
Imbopheleleko - ukukhonza ingqalelo kunye kunye noluntu lwaseSikhs.
Ukuqaliswa - umsebenzi wokuphila njengelungu elizibophezelekileyo lomphakathi waseSikh.
Ukulungiswa - kufuneka uxhomekeke kwisityholo sokungagqibekanga kwezibophelelo zokuQala.
Izinto ezisisiseko - uxanduva lokuphila ngokwemiqathango yeSikh.
Izibheno - zenziwe kuAkal Takat, isihlalo solawulo lwezokolo kuzo zonke iiSikhs.
Iinjongo zomntu siqu zeSikh Life
Ubomi bodwa beSikhh buquka:
Unqulo-ukucamngca ngoThixo, nokufunda kwisibhalo esingcwele sikaGugu Granth .
Ukuphila - ukuthobela iimfundiso ze- gurus eziyishumi kunye nokufundisa kukaGugu Granth.
Ingqesho - ukufumana ingeniso ethembekileyo, nokuqwalasela ukwabelana ngemali kunye nokuzibandakanya ngokuzithandela, ukungazinzi, inkonzo, ukuba ube ngumnikelo kwiGugu.
ISikh Unqulo Nqulo
U-Sikh ukholelwa kuyo, kwaye unqula uThixo omnye.
I-Sikh ibhekisela ekulandeleni kwe-gurus eyishumi, kunye negama elibhalwe kwiGugu Granth, umzila apho ukukhanya kukaThixo kubonakalisa njengosindiso.
AmaSik akhonza kwi-gurdwara, ehlanganisana nabalingane bokomoya, kunye nokuthetha noThixo, ngokucula iingoma zikaThixo ezikhethwe kwiGurth Granth.
AmaSikh enza i- ardas , umthandazo osemthethweni , kwaye ufunde ukusuka kuGugu Granth ngaphambi kokuba uqalise kwimisebenzi ebalulekileyo.
Ukungafani kweSikhism kugcinwa ngaphandle kweyiphi indlela yokunyelisa abanye, okanye ukunyelisa abanye ukholo.
Umsebenzi wemihla ngemihla yeSikh
Ishedyuli yentsuku yosuku lweSikh yile:
Vuka emva kweeyure ezintathu ngaphambi kokuhlwa kwaye uhlambe.
Cinga uThixo omnye, uphinde u-Waheguru kuze kube sekuseni.
Ukuphonononga imithandazo efunekayo ye- nitnem :
Ekuseni - Japji Sahib, Jap Sahib, iTev Prasaad Swaye.
Ngobusuku - iRehraas.
Ixesha lokulala - iKirtan Sohila.
Bhala umthandazo emva kokusa nakusihlwa nitnem .
Fundisisa kwaye ufunde ukufunda, kwaye ubhale iskripthi seGurmukhi .
Yenza umkhuba wokufunda kwisicatshulwa seGugu Granth nsuku zonke uzama ukugqiba ukufunda konke emva kweenyanga ezimbalwa, okanye ngokwamandla.
Ubomi Bentsapho beSikh
I-gurus yayifundisa ukubaluleka kobomi bentsapho ngomzekelo.
I-Sikh idla ngokutshata kwenye iSikh.
AmaSiks akayikukrazula okanye abulale umntwana ongakazalwa okanye usana olusandulwayo, okanye agcine inkampani kunye nababulali bomntwana.
Umntwana waseSikh ogama lakhe libizwa ngokweSikh.
I-Sikh ihlonipha inwele yomntwana kwaye igcina ingahambelani kwaye ihambelana.
Ngokumalunga nemfundo jikelele kunye nezifundo, abantwana bafumana ukufundiswa kwiSikhism.
Bonke abakwiSikhs bafunde iskripthi seGurmukhi .
AmaSiks angafunda ezinye iinkolo.
I-Sikh igcina ubudlelwane obusondeleyo kunye nomyeni okanye umfazi kuphela. Ubudlelwane nabanye babonwa njengento efanayo nomzali, umntakwabo, okanye umntwana.
Izambatho zeSih kunye nokuBonakala
Ikhowudi yokugqoka efunekayo yeSikhh i-kachhera, iingubo zangaphantsi, kunye neengubo . Umfazi waseSikh angakhetha ukubopha intambo, kodwa ukumboza ubuso kunye nokugqoka umzimba wakhe kuthathwa njengento engafanelekanga. Amacici, iindandatho zeempumlo, kunye nokunye ukubhoboza ukuhlobisa, akuvumelekile.
I-Sikh igcina zonke iinwele ekhanda, ubuso, kunye nomzimba wonke uhambelana kwaye awuhambelani ngokupheleleyo.
Ugqoke intambo engcwele.
Iimidlalo ezihamba ngeenwele.
Ukuqhawula intloko ekugcinweni kwabafileyo.
Ukugqoka umgca wee-herbs ezithatyathwe kwiindawo ezingcwabeni.
Ukudweba umqondiso wamasiko ebunzini
Izizathu Ezilishumi Eziphezulu Ukuba Ungabali Izinwele Zakho
Ngaba amaSiks avumelekile ukuba baxube amajoni abo?
Yonke Ingubo Yomdabu weSiko
Ukuziphatha kweSikh kunye neNkohlakalo kwiGurdwara :
AmaSiks agubungela intloko kwaye ahambe angenazicathulo phambi kweGurth Granth. Iingqayi zingaze zigqwe ngaphakathi ngaphakathi kwe-gurdwara, okanye nakuphi na iGurth Granth ikhona, ngaphandle kokuba ihambisa iGranth ngaphandle.
Akukho mntu ongena kwi-gurdwara angathatha inkunkuma okanye nayiphi na into enxilisayo.
Konke malunga neSikh Gurdwara
I-Sikh, kungakhathaliseki ukuba i-initiation status, ingabhemki okanye ingasebenzisa ityhiphi nayiphi na into, okanye idibene nezinye izidakamizwa kubandakanya:
I-opium kunye neengqungquthela.
Ubhiya, iwayini okanye olunye utywala.
I-marijuana, i-hemp, i- bhang kunye neminye imveliso ye-cannabis.
I-Sikh igwema ubudlelwane obungathembekanga, ukugembula kunye nokweba.
I-Code of Conduct FAQ: Ngaba i-Marijuana yezoNyango ikulungele iiKikhs?
Yintoni iGurbani Ethetha Ngomsebenzi WeMarijuana (i-Bhang) ?: Kwi-Deepness Insights
Iimpahla ezingahambisani neemfundiso zikaGurus
I-Sikh ihlonela kuphela isibhalo sikaGugu Granth. Ukufunda iincwadi zezinye iicawa kuvunyelwe iinjongo zokufunda. I-Sikh ukungahoywa kwaye anganikeli ukuba:
Ukuqwalaselwa kwezesini, i-caste, isimo, okanye umgca.
Ukugweba, ukukhutshiswa, iintsimbi, okanye i-clairvoyance.
Inkolelo-ze, ukubhula, izivalo kunye neempendulo.
Imihla engabonakaliyo, ii-horoscopes, okanye iinkwenkwezi.
Ukunqula imveli, ukuzonwabisa okanye ukuzila ukutya kwimihla ethile.
Ukunikezela ukutya kwokhokho okanye kumfi.
Amanqaku e-Grave, izikhumbuzo, okanye iindawo zokutshisa.
Ukukhutshwa kwezithixo, okanye ukukhanyisa izibane okanye ikhandlela.
Ii-pilgrimages, indawo, okanye izibhalo ezingcwele kwezinye iikholo.
Ngukuphi Usuku Ngaba Unqulo Lwee Sikhs?
Ukusebenzisa iMicrosoft Word 2003 ukubhala iPhepha
Ucinga njani ngoSuku lweValentine lweJamani?
I-Slang, iJargon, Idiom kunye neProverb echazwe kubafundi besiNgesi
Best Quotesgiving Quotes
Ngubani oMagquma eAgapito?